Top 10 Atụmatụ On Olee otú Iji Get More Website Hits - Ndụmọdụ Semalt
Otu n'ime ụzọ ndị ịntanetị nwere ike isi mee nke ọma bụ ịnya ụgbọ okporo ígwè dị ukwuu na saịtị ahụ. Atụmatụ iri a nyere site na Max Bell, Onye Ọrụ Nlekọta Ndị Na - ahụ Maka Ọrụ nke Ọkachamara , kwesịrị ịbawanye okporo ụzọ gị na mkpokọta weebụ.
# 1. Nyefee ebe nrụọrụ weebụ ahụ n'ime atọ search engine s. Ha bụ Google, Bing, na Yahoo (nke Bing kwadoro ugbu a site n'aka Microsoft). N'ụzọ dị otú a, ndị mmadụ ga-achọta ozi ụlọ ọrụ ahụ mgbe ha na-eme nyocha ha - seo platforms.
# 2. Mepụta ogo vidio ma nyefee ha na weebụsaịtị weebụsaịtị. Jide n'aka na itinye URL gị na mmalite na njedebe nke vidiyo ahụ, yana mpaghara mpaghara. Vidio nkowa na-enweta ọtụtụ ndị mmadụ iji gaa na saịtị ahụ.
# 3. Kekọrịta weebụsaịtị URL na Facebook. Ndị na-ele njikọ ahụ ga-achọ pịa ya ma hụ ihe ọ gụnyere. Ihe dị mma banyere Facebook bụ na ọ bụrụ na ha emee ya, ndị enyi ha ga-ahụkwa ihe a ma chọọ ka pịa ya. Nọgidenụ na-emelite ọdịnaya ahụ na saịtị ahụ site na ịkekọrịta isiokwu na ibe ọhụrụ ka ịchekwaa usoro okporo ụzọ weebụsaịtị . Ịmepụta akwụkwọ azụmahịa na Facebook bụkwa n'efu.
# 4. Gbalịa hụ na ihe e kere eke dị mma ma nyefee ya na akwụkwọ ndekọ ederede ewu ewu. Na igbe onye na-ede akwụkwọ, tinye adreesị weebụ ahụ ka ndị ọrụ nwee ike ịga leta ya ma ọ bụrụ na ha masịrị ọdịnaya a nyere. O kwesịkwara ịkọ na ọrụ ahụ a na-enye..
# 5. Kekọrịta na ebe nrụọrụ weebụ URL na ụmụazụ gị na Twitter. Ka ọ dị ugbu a, Twitter na-adabere n'elu dị ka ebe nrụọrụ weebụ na-ederede micro-blogging. Na ya, ndị mmadụ nwere ike izigara ụmụazụ ha ozi dị n'ụdị tweet. Ọ nwere nnukwu ohere ma ọ bụrụ na eji ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. E nwekwara nhọrọ nke ịwụnye njirimara bọtịnụ mmekọrịta mmadụ ebe ndị ọrụ nwere ike ịkekọrịta òkè na saịtị ndị ọzọ dịka Facebook na ihe ndị ọzọ.
# 6. Gbagoo na ihe oyiyi ihe oyiyi ma debe ha na saịtị gi. Ndị ọrụ ndị na-achọta ihe oyiyi ndị a na-ese foto ga-ekekọrịta ha na saịtị dị ka Pinterest. Ọ bụ ihe amamihe dị na ịnweta ihe oyiyi nke otu na-ekesa na nchịkọta dị otú ahụ dịka ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi kachasị elu maka ịkekọrịta foto. Ọ na-arụ ọrụ dịka Facebook na Twitter, ọ bụkwa n'ihi na ọ na-eru ya nso, ọ na-arụ ọrụ dịka isi iyi nke okporo ụzọ weebụsaịtị dị ka ndị na-ele onyinyo ahụ ga-achọ ịkọrọ ya ndị enyi ha.
# 7. Nyefee ebe nrụọrụ weebụ na ntuziaka site na akwụkwọ Yellow na akwụkwọ ndekọ mpaghara. Chọọ maka ndepụta ndị a na-ewu ewu na ebe ọrụ ma ọ bụ mba. Ọ bụrụ na ndị nọ n'ebe ahụ na-eme nyocha nke dabara ihe ụlọ ọrụ weebụ nyere, enwere ike ịghaghachi dịka akụkụ nke nsonaazụ.
# 8. Jide n'aka na saịtị ahụ na-egosi na ngalaba mgbasa ozi kachasị elu. N'ebe nrụọrụ weebụ ndị a, onye nwe ya niile chọrọ ime ka ha bipụ mgbasa ozi ha, na nkọwa zuru ezu, ghara ichefu itinye URL ahụ. Mgbe ndị ahịa nwere ike ịga na saịtị ndị a na-ewu ewu, ha ga-enwe ohere iji chọgharịa mgbasa ozi ahụ, ọ bụrụ na nkọwa ahụ na-ezuru ezu, ha ga-aga na saịtị ahụ.
# 9. Jiri usoro nkwụ ụgwọ site na pịa (PPC). Ọ bụ nhọrọ a na-akwụ ụgwọ nke na-eziga okporo ụzọ na mmesi obi ike nke ntọghata. Ihe na-eme bụ saịtị ahụ dịka ndepụta nke nkwado nke otu n'ime engines na-achọ ma nwetakwa mgbe ndị mmadụ na-achọ isiokwu ndị dị n'elu.
# 10. Jiri SEO. Usoro na-enyere aka azụ ahịa ịkwado elu na nchọta ọrụ ọchụchọ engines. Ezi saịtị ga-enwe URL ha na-ekerịta n'etiti ọha na eze. Tupu imejuputa SEO, jide n'aka ijide nduzi ndu ntughari.